Sazy mihantona telo volana an-tranomaizina kosa no azony noho ny fitarihana olona hidina an-dalambe. Milaza ho tsy afa-po kosa ny mpisolovava azy dia i Haja Rakotoson, ka mbola hifampidinihina ny zavatra hataon’izy ireo. Midika izany fa mety hisy ny fampiakarana ny raharaha mba hanafoanana tanteraka io sazy mihantona io. Vao maraina dia efa tonga teny Anosy ireo namany ao amin’ny Vondrona MAPAR, ny Mitsangana Ry Malagasy ary andian’olona avy any Soamahamanina ho fihombonam-po tamin’ity minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao tamin’ny tetezamita ity. Hentitra ny fitandroana ny filaminana teny amin’ny manodidina ny Lapan’ny Fitsarana Anosy nandritra ny fiandrasana iny valim-pitsarana omaly iny. Ny 10 desambra 2016 i Augustin Andriamananoro no nosamborin’ny zandary teny am-pandevenana teny Itaosy, ary azo ambara ho afa-doza taorian’ny 17 andro nitazonana am-ponja azy teny Antanimora, na dia mbola mitatao aminy aza ny sazy mihantona. Taraiky sy toy ny tsy misy mpiahy kosa i Alain Ramaroson izay efa am-bolana maro izay no nidirany eny Antanimora. Adim-pianakaviana no antony saingy maro no mihevitra sy mahatsapa fa politika no ao ambadiky ny fitazomana an’i Alain Ramaroson, ary tsy fantatra intsony ny hivoahany eny, ny fitsarana aza tsy mbola vita. Mpanao politika somary mahery fiteny sy mpanakiana mafy izao fitondrana izao i Alain Ramaroson. Maro ny manombana fa vokatr’izay firehan-keviny izay no nandetehana azy. Ny tena loza dia efa nisy ny resaka nivoaka fa olona akaiky azy ihany, te hiara-kiasa amin’ny HVM, no mandetika an’i Alain Ramaroson noho io firehan-keviny manohitra fitondrana io, ka ho famaizana no antony handetehana azy toy izao. Tsy vitsy ireo mpanao politika akaiky an’ity filohan’ny antoko Masters ity, indrindra fa tamin’ny andron’ny tetezamita, saingy tsy nisy niraharaha izao fahavoazany izao fa dia nanary azy tanteraka sy tsy mahalala ny fisiany akory. Mbola taraiky ihany koa i Nivo Ratiarison, Tale kabinetran’ny minisiteran’ny serasera, izay voarohirohy tamin’ny fanodinkodinana volaben’ny haino aman-jerim-panjakana. Samy mitsabo tena any amin’ny hopitaly izy sy Rafanomezantsoa Jean Nirina (HAFARI) amin’izao.